बाबुरामको नयाँ शक्तिमा २२ जना थपिए (सुचीसहित )
१२,माघ,काठमाण्डौं । बाबुराम भट्टराइ संयोजक रहेको नयाँ शक्ति नेपालको अन्तरिम केन्द्रीय परिषदमा आज थप २२ जना थप गरिएको छ । २ सय ६५ जनाको अन्तरिम परिषद् बनाउने तयारी गरिएकोमा यसअघि ३५ जनाको नाम सार्वजनिक गरिकएको थियो । दोस्रो लटमा थपिएका अधिकांश पूर्वमाओवादी नेता रहेका छन् । हेर्नुस् थपिएका परिषद् सदस्यहरु १ कर्णध्वज केसी प्यूठान २ कलामुद्दीन राइन् महोत्तरी ३ कल्पना धमला धादिङ ४ कुमार पौडेल …विस्तृत समाचार »
प्रधानमन्त्रीको नक्कली फेसवुक आईडीले हैरान
१२,माघ,काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री एवंम् अध्यक्ष केपी ओलीको नाममा फेसबुक सञ्चालनमा आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको कुनै फेसबुक पेज नरहेको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भन्दै चलाइएको पेजमा जथाभावी पोष्ट हुन थालेपछि प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको छ । दाहालले प्रेस नोट जारी गरि भन्नुभएको छ– सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओलीज्यूको नाममा फेक आईडी प्रयोग गरी फेसबुक सञ्चालन भईरहेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकृष्ट…विस्तृत समाचार »
संसद बैठक लम्ब्याउने तयारी
१२ ,माघ ,काठमाडौ। गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित भएको व्यवस्थापिका संसदको बैठक आज बस्दैछ । नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा १ बजे बस्ने बैठकमा विभिन्न विधेयक पेश हुने बुझिएको छ । यसअघि सोमबारको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि आजका लागि स्थगित भएको थियो । यसैबीच, संसदको बैठक अलि लामो समयसम्मका लागि स्थगित गर्ने तयारी भएको छ । संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार कांग्रेसको मागअनुसार माघको अन्त्यसम्म संसद बैठक स्थगित…विस्तृत समाचार »
गोइत कार्यकर्ता भन्दै चन्दाका लागि धम्क्याउने पक्राउ
१२,माघ लहान। जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा गोइत समूहको कार्यकर्ता भन्दै व्यापारीसँग चन्दा सहयोग माग्ने र नदिए अपहरण गरी ज्यान गर्ने धम्की दिएको आरोपमा प्रहरीले सिरहाको लहानबाट एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । आफूलाई गोइत समूहका कार्यकर्ता भनी सिरहाको लहान नगरपालिकाका स्थानीय व्यवसायीसँग आर्थिक सहयोग माग्ने र नदिए अपहरण गरी ज्यान मार्ने धम्की दिँदै आएका लहान नगरपालिका–८ निवासी विजय पासवानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।व्यापारीसँग चन्दाका लागि…विस्तृत समाचार »
किन गर्दैछ एमाले काग्रेसको महाधिवेशन रोक्ने षड्यन्त्र
१२,माघ काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस आफनो पार्टीको १३ औ महाधिवेशन रोक्ने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीको अगुवाइमा सोमबार सिंहबारमा राखेको प्रमुख पाँच दलका शिर्ष नेता र प्रमुख सचेतकको बैठकमा काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले एमालेले आफनो पार्टीको महाधिवेशन रोक्ने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । संसदीय नियमावली अनुमोदन गराउन प्रमुख…विस्तृत समाचार »
यसरी मिल्यो कांग्रेस लफडा
१२,माघ,काठमाण्डौं । क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिलाउने र जिल्ला सभापति कतिपटक हुन पाउने भन्ने टुंगो लगाउन कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक सोमबार बिहान ९ बजेलाई डाकिएको थियो । आकस्मिक भन्दै डाकिएको बैठकमा भाग लिन अधिकांश केन्द्रीय सदस्य समयमै केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगे । केन्द्रीय सदस्यका लागि भित्र बैठक हलमा होइन, बाहिरै आागनमा प्लास्टिकका कुर्सी राखिएको थियो । उनीहरूलाई त्यहीा बस्न भनियो । केन्द्रीय सदस्यहरू बाहिर चिया खाएर…विस्तृत समाचार »
नेपाल–भारतबीचको असमझदारी हट्दै : परराष्ट्रमन्त्री
११,माघ काठमाडौं । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपाल र भारतबीचको असमझदारी हट्दै गएको दाबी गर्नुभएको छ । आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाले नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि चिसिएको सम्बन्धमा दुबैतर्फको प्रयासपछि न्यानोपन विकास भएको जिकिर गर्नुभयो । कार्यक्रममा भारतीय राजदूत रणजित रायले संविधान संशोधन गरेर नेपाल सरकारले समस्या समाधानको दिशामा कदम चालेको र यसमा भारतको समर्थन रहेको बताउनुभयो । उहाले बाँकी रहेका समस्याहरुको पनि…विस्तृत समाचार »
डाक्टर केसीको माग चाहेर पनि पुरा गराउन सक्दिन : मन्त्री पोखरेल
११ , माघ काठमाडौं ।शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले डाक्टर गोविन्द केसीको माग आफूले चाहेर पनि पुरा गराउन नसक्ने बताउनुभएको छ । आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै गोविन्द केसीले अनसन बस्ने चेतावनी दिइरहेका बेला शिक्षा मन्त्री पोखरेलले कतिपय माग आफूले चाहेर पनि पुरा गर्न नसक्ने भएकाले समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले डाक्टर केसी अनशन बस्ने परिस्थितिको अन्त्य गराउन चाहेको बताउनुभएको छ । शिक्षा पत्रकार सञ्जालले काठमाडौंमा गरेको…विस्तृत समाचार »
कोइरालाको स्वास्थ्य कमजोर, अक्सिन नछाड्न सल्लाह
११ माघ काठमाडौं । स्वास्थ्य स्थितिले साथ नदिएपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला जिल्ला भ्रमणमा निस्कन सकेका छैनन् । तर, बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल भने जिल्ला भ्रमण तथा कार्यकर्ता भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । जिल्ला भ्रमणमा जान नसके पनि कोइरालाले कार्यकर्तालाई आफ्नै निवासमा भेट्ने गरेका छन् ।भेटेर फर्कने कार्यकर्ताहरु सभापति कोइराला पुनः उम्मेदवार बन्ने कुरामा ढुक्क देखिन भने सकेका छैनन् ।…विस्तृत समाचार »
अध्यक्षकै पूत्रलाई मन्त्रीको एम्बुस !
११,माघ,काठमाडौं । पञ्चायककालदेखिका दुई प्रतिश्पर्धी हुन्, सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द । थापाको निधन भइसकेको छ र उनले आफ्नै जीवनकालमा छोरा सुनीललाई मन्त्री बनाएरै छाडे । तर, प्रतिश्पर्धी चन्द अहिले राप्रपाको अध्यक्ष नै भएपनि उनले आफ्नो छोरालाई कसैगरेपनि मन्त्री बनाउन सकेका छैनन् । मुखैमा आएको मन्त्री पदपनि छोरा जयन्तले नपाउने अवस्था बन्दै गएको छ । जयन्तलाई मन्त्री बनाउन लोकेन्द्रले ठूलै राजनीतिक जुवा खेलेका थिए ।…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 725 726 727 728 729 Older Last ›